Sea Port အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် Sea Port: Ship Simulator & Strategy Tycoon Game
ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း, ကုန်တင်သင်္ဘောနှင့်လှေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူဌေးနှင့် Ocean Business Games ကိုဖွင့်ပါ။ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်မြို့တစ်မြို့ကိုတည်ဆောက်ပြီးသင့်လက်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်သင်္ဘောတိုင်းကိုစီမံပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားပင်လယ်နှင့်သမုဒ္ဒရာကပ္ပတိန်ဖြစ်စေမည့်အနားယူခြင်း⛵ဂိမ်းများနှင့်ဆိပ်ကမ်းမြို့တည်ဆောက်သူဖြစ်သည်။ သင်၏သင်္ဘောကိုရွေးပါ, မဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ပြီးဤဂိမ်းများရှိမြို့တစ်မြို့ကိုတည်ဆောက်ပါ။
Tycoon ⛵ဂိမ်းများအတွက်ကပ္ပတိန်ဖြစ်ဖို့လိုသလား။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောများနှင့်လှေများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ရေနံ, သံမဏိ, သံမဏိ, လှေ, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ဤသင်္ဘောတင်သင်္ဘော၏ကပ္ပတိန်ဖြစ်လာရန် Tycoon ⛵ဂိမ်းများကိုသင်၏စင်းကိုမဟာဗျူဟာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ဆိပ်ကမ်းမြို့ကိုတည်ဆောက်ပါသို့မဟုတ်မြို့တစ်မြို့ကိုတည်ဆောက်ပါ, ထို့နောက်သင်၏အိပ်မက်များကိုဆိပ်ကမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုသို့တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကသင့်အားလှေကုန်သွယ်ရေး, ကုန်တင်သင်္ဘောပျံသန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မြို့မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်တင်သင်္ဘော၏မဟာဗျူဟာကိုကျွမ်းကျင်သူ ဦး စီး0ယ်သူဌေးကြီး။
ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းတွင်သင်ခန်းစာကြီးများကိုသင်ရှာဖွေရန်နှင့်စုဆောင်းရန်နှင့်စုဆောင်းခြင်းကိုသင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်သင်္ဘောကြီးများတွင်ရှာဖွေရန်နှင့်စုဆောင်းရလိမ့်မည်။ သင်္ဘောကပိုကောင်းလေလေလေယာဉ်ပျံလေလေ, သင်၏နည်းဗျူဟာဖြစ်လာနိုင်လေလေ, ဥပမာအားဖြင့်လှေ, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ဇိမ်ခံရွက်လှေတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်ကြီးများမရှိပါ။ လိုအပ်သောကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောစာချုပ်များကိုဖြည့်ခြင်းသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ စိတ်မပူပါနှင့်! သင်၏သင်္ဘောပြတိုက်၌သင်၏ခေတ်ရေဟောင်းများကိုသင့်ကိုသိမ်းထား ဦး မည်။ သင်္ဘောများသည်ထာဝရတည်ရှိပြီးမဟာဗျူဟာများမှာမဟာဗျူဟာများဖြစ်သည်။
Sea ဆိပ်ကမ်းမဟာဗျူဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ။ မြို့တော်ခန်းမ, စောမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီမီခြင်း, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ရွက်လွှင့်ခြင်း, ယခုတည်ဆောက်ပါ!
▶သင်ကိုယ်တိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူဌေးကြီးမဟာဗျူဟာနှင့်အတူတက်လာပြီးသင်၏ဆိပ်ကမ်းမြို့တော်ကြီးထွားရန်ကူညီပေးသည့်ကုန်တင်သင်္ဘောရေယာဉ်စုကိုအတူတကွစုစည်းပါ။ ▶လှေမြို့နှင့် စတင်. သင်၏အိပ်မက်များကိုတည်ဆောက်ပါ သင်၏ကျွန်းပတ်0န်းကျင်ရှိသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိသမုဒ္ဒရာရှိသမုဒ္ဒရာရှိသမုဒ္ဒရာရှိသမုဒ္ဒရာရှိသမုဒ္ဒရာရှိသမုဒ္ဒရာရှိသမုဒ္ဒရာရှိသမုဒ္ဒရာသင်္ဘောသားများ, ဗိုလ်ကြီးများ, ဗိုလ်ကြီးများ, သင်၏လှေလန်းလန်းမှုကိုကြာမြင့်စွာမထားခဲ့ပါနှင့်, ၎င်းကိုစစ်မှန်တဲ့ရေနံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Tycoon Protest Tyoon Play အသစ်များနှင့်အခြားဆုများကစားခြင်းနှင့်အခြားဆုများကစားခြင်း ထို့အပြင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်ရေနံသို့မဟုတ်သံမဏိကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကဲ့သို့သောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုဖွင့ ်. ⛵ Games တွင်စီးတီးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်
သမုဒ္ဒရာ၏အကောင်းဆုံးသောရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်ရန်မည်သည့်နည်းဗျူဟာဖြစ်ရန်ရွေးချယ်မည်နည်း။ သင်၏အိပ်မက်များကိုစီးပွားရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူဌေးကြီးကိုအဖြစ်မှန်သို့ပြောင်းလဲပါ။ Sea Sea Port ကို⛵ဂိမ်းများကြားတွင်ကျော်ကြားရန်ယခုတည်ဆောက်ပါ။
ကျေးဇူးပြု. မှတ်သားပါ။ SeaPort သည်အွန်လိုင်းအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူဌေးကြီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကစားရန်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဂိမ်းများကိုကစားရန်နှင့်ကစားရန်ဂိမ်းများဖြစ်သည်။ အချို့သောဂိမ်းပစ္စည်းများကိုအစစ်အမှန်ငွေကြေးအတွက်လည်း0ယ်ယူနိုင်သည်။ သင်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးမပြုလိုပါကသင်၏ကိရိယာချိန်ညှိချက်များတွင် In-app ဝယ်ယူမှုများကိုပိတ်ပါ။
သင်၏ port တွင်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်ပြ problems နာများရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရုစိုက်တတ်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းမန်နေဂျာများသည်သင့်ထံမှစကားကိုကြားလိုကြသည်။ https://care.pxfd.co/seagort ကိုသွားပါ။
အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ - http://pxfd.co/eula
http : //pxfd.co/privacy
သင်၏သင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Tycoon ⛵ဂိမ်း? နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုရယူရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ် @seeAportgame ကိုလိုက်နာပါ။
ဘာအသစ်လဲ Sea Port: Ship Simulator & Strategy Tycoon Game 1.0.181
A new event is on! Let’s visit South America in the Amazonian Adventure Event.
- Help the biologist Lana findacure foraterrible disease in the midst of the Amazonian jungle. You will be accompanied by the brave jungle guide John and the local girl Tayanna.
- Participate in the new Expedition with three stages and win the corresponding competition.
Sea Port Ship Games & Transport Tycoon Strategy Part 1
Angutha Chhap Gaming
Seaport: Ship Simulator & Strategy Tycoon Game (ANDROID/IOS) - GAMEPLAY
TECH ALI HD
Sea Port: Ship Simulator & Strategy Tycoon Game (2021) - Gameplay
Mobile Gaming All The Way
Sea port: Ship Simulator & Strategy Tycoon Game | Nice Sea port Ship Simu Game | Ship Android Game
chit Thae mg ken Bo
mon4 kotun Athena